Ku cusbooneysii shabakadaada 16-kan CSS Cascading | Abuurista khadka tooska ah
Liistada Cascading ama dropdown waa muhiim u ah ku dhowaad nooc kasta oo degel ah. Gaar ahaan kuwa u baahan hordhaca xogta booqdaha, sida wax fudud sida doorashada jinsiga ama xulashada midabka uu noqon doono shaarka aad doonaysid inaad ku iibsato e-commerce.
1 Menu Waterfall
2 Liiska soo daadinta oo leh jQuery
3 Qaabka menu-biyo dhaca
4 Liistada biyo dhaca ee dhaqdhaqaaqa ah
5 Saamaynta liiska soo daadinta
6 Animation Waterfall ee ku jira menu
7 Iyada oo yar jQuery: menu Waterfall
8 Liiska biyo-dhacayaasha ee quruxda badan
9 Liiska ku daadinta CSS
10 Liiska soo daadinta
11 Liiska biyo-dhaca fudud
12 Hordhaca menu menu
13 Liiska ku daadinta CSS
14 Menu Waterfall leh JS yar
15 Meel kale oo CSS cascading menu ah
16 Cascade menu zig zag concept
Liiska soo daadinta oo leh jQuery
Qaabka menu-biyo dhaca
Liistada biyo dhaca ee dhaqdhaqaaqa ah
Liiskan hoos u dhaca wuxuu isku dayayaa inuu muujiyo isticmaalka ka raagay animation mid kasta oo ka mid ah canaasiirta soo ifbaxaya markaad ka tagto tilmaamaha jiirka ee menu kasta. Iyadoo dhowr meelood meel dib loo dhigo, saameynta dib udhacaas ayaa la gaaray taas oo siinaysa taabasho aad u gaar ah.
Saamaynta liiska soo daadinta
Sida haddii a taxane ah oo kaararka ka sagxad ah, animation-ka miiskan biyo-dhaca ayaa aad ugu khaas ah. Saameyn biyo-dhac wanaagsan oo CSS nadiif ah. Waxaad horeyba u ogtahay waxa ay tahay inaad sameyso si aad uga hirgeliso bartaada.
Animation Waterfall ee ku jira menu
Iyada oo yar jQuery: menu Waterfall
Liiska biyo-dhacayaasha ee quruxda badan
Liiska ku daadinta CSS
Un menu-biyo-dhaca ugu yar iyo in si khaas ah loogu qaabeeyey CSS. Animation fudud, laakiin sifiican ayaa loo qabtay si uusan u istaagin. Liis aan la dareemi karin oo raacaya heerarka naqshadeynta hadda.
Liiska soo daadinta
Cuntadan CSS cascade ee nadiifka ahi waa mid kale si fiican loogu kala soocay animation taasi waxay dhacdaa markasta oo aan gujino liiska. Animation-ku wuxuu daaqada ka daaqayaa dhinaca midig oo leh wakhti ku habboon. Mid kale oo ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan liiska oo dhan.
Liiska biyo-dhaca fudud
Liiskan ayaa asal ahaan fudud wuxuuna ka kooban yahay HTML iyo CSS. Waa mid kale oo ka mid ah menusyada noo oggolaanaya inaan cusbooneysiino qaybtaas muhiimka ah ee degelkeenna iyo taas ha siin qashin badan. Waxaan u maleynayaa in si wanaagsan loo fahmay waxa aan uga jeedno.
Hordhaca menu menu
In kasta oo ay haddaba tahay in la fuliyo uu 4 sano, Liiskan biyo-dhaca ah ayaa ku dhajinaya midigta ku xigta si qurux badan oo hal abuur leh. Haddii aad raadineyso wax ka duwan, waa mid kale oo aad ka xulan karto liiska.
Liis kale oo kaliya ayaa ku jira CSS iyo taas waa midab midab leh, uguyaraan ku-habboonaanta lagu siiyay tusaalaha. Midabbada fidsan, animation-ka ayaa muujinaya saameynta isdabajooga ee hoos u dhigaya qaybaha kala duwan ee xulashada xulashada. Mid kale oo ka mid ah liiska xiisaha xiisaha leh ee ku dhaca liiska oo leh mawduuc si wanaagsan loo xushay.
Menu Waterfall leh JS yar
Meel kale oo CSS cascading menu ah
Menu A cascading la animations kaas oo waxaa jira wax adag oo dib u dhac ah kun meelood labaad. Marka waxay soo saartaa saameynta deg degga ee soo booqdaha. Hover saameyn iyo menu soo jiidasho leh oo xiiso leh iyadoon wax faneed ah laga helin heer guud.
Cascade menu zig zag concept
Haddii aad raadineyso menu aan ka aheyn liiska oo dhan boostadan, liiskan hoos u dhaca wuxuu leeyahay wax walba oo aad raadsan karto. Ku animation la soo saaray waa zigzag inaad bixiso nooc kale oo khibrad ah oo tijaabo yar ah. Waxay sifiican ugu habboonaan kartaa mowduuc ciyaarta fiidiyowga ah, sidaas darteed haddii aad leedahay nooc kasta oo macmiil ah oo raadinaya wax ka duwan, hubaal waa midka ugu habboon liiska oo dhan. Qaababkeeda jajaban iyo animation dhakhso leh ayaa dhahaya dhammaantood.
Waan kuu daayey adiga taxanahan liiska CSS ee boggaaga kuwaas oo leh tiro aad u tiro badan oo iyaga ka mid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » CSS » 16 menus cascading ee CSS si dib loogu habeeyo websaydhkaaga
Qaab qorista saameynta qiiqa leh Photoshop
Isu dheellitirka asymmetric ee qaybtan oo cambaareynaya saameynta xun ee gacanta nin